Mbupu Mbupu - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
JERA fiber na-enye ngwaahịa dị elu na ọrụ kachasị mma maka ndị ahịa.
Ihe anyị na-eche abụghị naanị mma ngwaahịa a, kamakwa ọnọdụ nke ngwaahịa mgbe ebupuchara ya na njem aka 3rd. Karịsịa maka Mbupu LCL, Enwere ike ịnwe ọtụtụ njem tupu ngwongwo ahụ eruo njedebe ikpeazụ, yana sistemụ ngwakọ anyị nwere ike ijide n'aka na ngwugwu ahụ siri ike iji zere ngwaahịa ọ bụla mebiri n'oge njem.
Anyị ga - enyere ndị ahịa anyị aka ịchọta ụzọ eji arụ ọrụ ọfụma ma dịkwa mma n'oge mkparịta ụka ịzụta ihe, nke ga - enyere ha aka ịchekwa ego ha.
Anyị na-enyekarị ndị ahịa anyị ụzọ dị iche iche:
1.ịdị elu Carton. Packagezọ ngwugwu a na-etinyekarị na mbukota ngwaahịa dị arọ dịka eriri fiber optic, dobe eriri USB, igbe nkesa fiber optic na wdg.
2.High-quality Carton tinyere poly akpa. Packagezọ ngwugwu a na-etinyekarị na mbukota ngwaahịa dị ka igwe anaghị agba nchara, agbụ igwe anaghị agba nchara, voltaji ọkara na ngwa eletriki dị elu, eriri bolt ma ọ bụ brackets.
3.Pallets osisi a haziri ahazi. Fọdụ ndị ahịa na-arịọ pallets ka ha wepụta ibu ha mgbe ha na-eme LCL ma ọ bụ FCL. A na-etinye ngwungwu a na ngwugwu ọkụ na ngwaahịa ndị nwere ike ịnweta dị ka akwa akwa ABC cable, njikọta ndị a gwara mmanụ, eriri eriri, ngwa USB FTTH na wdg.
4.Wooden igbe. Etinyere ya maka ọrụ kachasị dị ukwuu ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ. Dị ka anya anya, clevis, bọl anya Ihọd grips wdg
Nabata ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ! Ga-enweta ụdị asọmpi nke ngwaahịa FTTX nke nwere ogo dị elu, nnyefe ọsọ ọsọ na ọrụ kacha mma sitere na Jera.